Sanduuqa Guriyeynta Qoyska: Sanduuqa Bakhliga Guriga
Sanduuqa Guriyeynta Qoyska wuxuu ilaaliyaa oo abuuraa guryaha la awoodi karo ee ku yaal aagga metro ee Twin Cities. Waxa kale oo uu abuuray Magaalooyinka Mataanaha ah ee Baanka Dhulka si ay si istaraatiijiyadeed u maalgaliso dhulka iyo dhismayaasha.
Sarrifka si loo yareeyo dhibaatada musuqmaasuqa ee Minneapolis-St. Booska Booska Baaskiiladana waa heysta awood u leh qoysaska dakhliga hoose iyo kuwa dhexdhexaadka ah.
Tan iyo 2009, Sanduuqa Guriyeynta Qoyska Sanduuqa Faa'iidada Guriga wuxuu caawiyey in ka badan 482 guri oo caawiyey 207 qoysaska dakhligoodu yar yahay illaa heer dhexdhexaad ah waxay keenaan guryo degan oo waara. Tani waxay gacan ka gaysatay xasilinta xaafadaha magaalooyinka ee ay ku dhufato dhibaatada la-qaboojiyay.
Sanduuqa Guriyeynta Qoyska wuxuu adeegsadey caasimadda McKnight si uu u furo bangiga Dhismaha Bulshada ee Twin Cities, oo ah shirkad awood leh oo raasamaal ah oo raasamaal ah ka caawisa dhismaha guryaha la wadaago ee la awoodi karo iyo goobaha dhaqaale ahaan ka soo jeeda.
Miisaaniyadda Hoyga ee Baanka Tan iyo bilowgii
Qoyska oo qaata caawimaad guri 207
Guryaha helaya gargaarka horumarinta 482
Guryaha tirakoobka tirakoobka dakhliga hoose 141
Guryaha tirakoobka dakhliga dhexdhexaadka ah 232
Sannadkeedii siddeedaad, McKnight wuxuu u tixgeliyaa deyntan guusha. Qaadashada caasimadda maal-gashiga waxay dhistaa awooda u lahaanshaha McKnight si ay u fahmaan goorta, meesha, iyo qofka, deeq-lacageedka ama maalgashiyada dollars ay yihiin qalabka saxda ah ee waqtiga saxda ah. Iyada oo dabacsanaan ka iman karta amaahda, khabiirada guriyeynta waxay isticmaali karaan raasamaal muddo dheer ah si ay u abuuraan. Sanduuqa Guriyeynta Qoyska wuxuu billaabay Baanka Dhismayaasha Bulshada ee Twin Cities kaas oo sahlaya soo iibsiga, dib u habeyn, iyo dib u isticmaalka guryaha guryaha loo geysto inta lagu jiro xiisadda. Ka dibna wuxuu istiraatiijiyaddiisa ku hagaajiyay qiimaha hoose ee qallalka ka dib si loo abuuro maaliyad istaraatiijiyadeed oo istiraatiijiyadeed. Sannadka 2016, Sanduuqa Guriyeynta Qoyska (Family Housing Fund) ayaa ka dhexdhacay bangiga dhulka oo buuxinaya faraqa u dhexeeya suuqyada si loo qabsado hantida aan la daboolin oo lagu gaaro horumarinta maaraynta himilada si waafaqsan Gobolka & Bulshada ujeedooyinka barnaamijka.
Sawir Sawir ah: (Sare) Sawirka Scott Streble, oo madax u ah Sanduuqa Guriyeynta Qoyska